Fivoaran'ny covid-19 :: Miha mampivarahontsana ny toe-draharaham-pahasalamana • AoRaha
Fivoaran’ny covid-19 Miha mampivarahontsana ny toe-draharaham-pahasalamana
Tsy mitsahatra midangana ny fahavoazana ateraky ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 eto amintsika, indrindra ho an’ny Faritra Analamanga. Miha mihoapampana sady mamono olona marobe ny tatitr’ireo tarehimarika teo anelanelan’ny 25 desambra sy 31 desambra 2021: maherin’ny roa arivo ny isan’ny marary vaovao ary nahatratra efapolo ny olona matin’ny Covid-19, araka ny tatitry ny minisiteran’ny Fahasalamambahoaka, afak’omaly. Efa loza mihatra tanteraka raha ny zava-misy, satria tafakatra fito amby enimpolo sy arivo ny fitambaran’ny Malagasy lavon’ny Covid-19 hatramin’ ny nisian’ny valanaretina teto amin’ny Nosy.
Teto Analamanga avokoa ny roapolo sy eninjato sy arivo tamin’ireo tranga vaovao dimy amby dimampolo amby zato sy roa arivo voamarina fa mitondra ny tsimokaretin’ny Covid-19. Mitombo kosa ny tarehimarika any Vakinankaratra, amin’ny alalan’ireo marary vaovao roa amby roapolo amby zato any antoerana. Sivy amby valopolo indray ny tranga vaovao tany Atsimo Andrefana, raha iraika amby valopolo tany Diana. Ireo faritra ireo, hatreto, no tena ahitana antontanisa manaitra indrindra momba ny fivoaran’ny valanaretina.
Fitomboan’ireo marary mafy
Mitombo isa manaraka an’izao fivoaran’ny Covid-19 izao ny fahabetsahan’ny marary iharan’ny tranga misy fahasarotana, izay nahatratra dimy amby fitopolo, araka ny tatitra tamin’ny sabotsy hatrany. Soa fa misy hatrany ny olona sitrana. Tafakatra fito amby fitopolo sy roanjato sy arivo ireo tafavoaka mpandresy tamin’ny ady amin’ny Covid-19, ankehitriny.
Manamafy ny fanentanana mikasika ny tsy maintsy hanarahan’ny rehetra ny fepetra hisorohana ny fihanaky ny valanaretina ny minisiteran’ny Fahasalamambahoaka. “Mila mailo fa tsy tokony hatoky tena loatra ny tsirairay. Entanina mandrakariva ny rehetra hanaja ireo fepetra noraisin’ny Fanjakana ho fiarovana antsika sy hisorohana ny fiparitahan’ny valanaretina. Hajao ireo fepetra sakana, manaova vaksiny ary ampitomboy ny hery fiarovana”, hoy ny antso avo nataony.
Fihanaky ny valanaretina :: Mampiomana ny hidirana amin’ ny andiany fahatelo ny Filoha